Bariga Afrika – Page 3 – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika (page 3)
Gaas “Badhan ayaa ka dakhli badan Qardho” Video!
September 20, 2018	Comments 1,093 Views
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa intuu booqashada ku joogay degmada Badhan ee Gobolka Sanaag wuxuu ka qayb galay munaasabado dhawr ah oo uu kula hadlayey dadka deegaanka. Gaas oo Arbacadii ka qudbaynayey munaasabad lagu daahfurayey dhisme cusub oo ay yeelaynayso Jaamacadda Maakhir oo dawladda Kuwait ay maal galisay, ayaa Gaas wuxuu sheegay in ...
Gaas oo xariga ka jaray Jaamacadda Maakhir (Video)
September 20, 2018	Comments 489 Views
Badhan, Gobalka Sanaag
Somaliland oo cambaaraysay Safarka MW Gaas ee Sanaag
September 20, 2018	Comments 502 Views
Somaliland ayaa xad gudub ku tilmaantay socdaalka madaxwayne ee Badhan. Kulan ay yeesheen madaxda seddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland ayaa la sheegay in lagu lafa-guray arrimo badan oo ku saabsan Somalialand, waxaana ugu dambeyn shir jaraa’id wada qabtay Madaxweyne Xigeenka Somaliland, iyo gudoomiyayaasha labada xisbi ee Ucid iyo Wadani. Madaxweyne Xigeenka Somaliland ayaa yiri: “Waxannu halkan ka cambaaraynaynaa madaxweynaha maamul-goboleedka ...
Golaha Wasiirada Puntland oo markii u horaysay ku shiraya Degmada Badhan ee Sanaag
September 20, 2018	Comments 442 Views
Golaha Waziirada Puntland ayaa shirkoodi khamiislaha ahaa maanta ku qabtay Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag. Labadii Bari ee u dambeeysay ayaa magaalada Badhan waxaa ku sugnaa Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo wafdi wasiiro iyo xildhibaano u badan oo socdaal ku marayey gobolka Sanaag. Madaxweyne Gaas ayaa intii uu joogay magaalada Badhan wuxuu furay Jaamacadda Maakhir University oo ay dawladda Puntland ugu ...
Dawlad Goboleedyada Qaar oo war kasoo saaray heshiiskii Hirshabeelle & Dawladda Dhexe
September 20, 2018	Comments 379 Views
Golaha Iskaashiga Dowladd Goboleedyadda dalka ka jira ayaa war kasoo saaray mowqifkii maamul goboleedka Hirshabeelle uga laabatay go’aankii maamul goboleedyada ku gaareen Kismaayo ee xiriirka loogu jaray dowladda Federaalka. Qoraal ay soo saareen golaha ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle iyo dowladda Federaalka aanu khuseyn Golaha. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in Hirshabeelle u madax banaan tahay ka tashiga ...
Hogaamiyayaal Alshabaab ah oo ku le’day weerar loogu gaystay Saakoow
September 19, 2018	Comments 403 Views
Horjoogeyaal ka tisan maleeshiyada Alshabaab oo lagu laayay duqeyn ka dhacday Saakow In ka badan 12 ka mid ah maleeshiyaadka Alshabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacaday degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe, halkaas oo ay gacanta ku hayso kooxda argagixisada ah ee Alshabaab. Duqeynta dhinaca cirka ah waxaa lala beegsaday goob ay ku shirsanaayeen horjoogeyaal ka tirsan maleeshiyada Alshabaab ...
September 19, 2018	Comments 476 Views
Daawo: Madaxweyne Waare oo sheegay inay qancisay Dawladda Federaalka
September 19, 2018	Comments 419 Views
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Hirshabeelle Mudane Waare ayaa sheegay in dawladda federaalka ay la qaateen wadahadal dheer oo qaatay muddo 4 cisho ah. Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dawladda ay siiyaan fursad lagu saxo tabashooyinka gaar ahaan u tabanayso dawlad goboleedka Hirshabeelle. Hoos ka daawo shirka jaraa’id ee Madaxweyne Waare:
ONLF oo rajo weyn ka qabta wada-hadallada Itoobiya
September 19, 2018	Comments 387 Views
Jabhadda ONLF ayaa rajo ka muujisey in natiijo wanaagsan ay kasoo baxdo shir ay magaalada Asmara kula leeyihiin dowladda Itoobiya. C/qaadir Hirmooge, Afhayeenka Jabhadda ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la gaaray xilligii isbedallada ee dalka Itoobiya. Waxaa lagu wadaa todobaadyada soo socda in Magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea uu ka qabsoomo heshiis u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo ururka ...
Hirshabeelle oo la Heshiisay Dawladda Dhexe
September 19, 2018	Comments 363 Views
Dowlada Soomaaliya iyo Dawlad Goboleedka Hirshabelle ayaa Heshiis ka gaaray Khilaafki Udhaxeeyay. War saxaafadeed uu soo saaray DG Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in wadahadal dhex maray Madaxda dowlada Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Hirshabelle oo uu hogaaminaayay Madaxweynaha Maamulkaasi Maxamad Cabdi waare ayaa lagu sheegay in ay dib ubilaaban doonto wadashaqeynti udhaxeysay labada dhinac.